Fotoana Fohy Talohan’Ny Nahafatesany, Nizara Ny Fihetsehampony Tao amin’ny Tedx Talk Momba Ny Tolony Handresena Ny Homamiadana i Lara Khatib , Mpianatra Avy Any Libanona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Septambra 2014 3:22 GMT
Sara Khatib tao amin'ny TEDxLAU. Sary nalaina tao amin'ny Humans of LAU. Nahazoana alalana ny fampiasàna azy.
Nampirotsaka ny ranomason'ny olona tao amin'ny aterineto ny fahafatesan'ny mpianatra iray tao amin'ny Lebanese American University (LAU) noho ny homamiadana tamin'ny 5 Septambra.
Roa amby roapolo taona i Lara Khatib, mpianatra ao amin'ny taona fahaefatra ao amin'ny sampana farmasia ao amin'ny LAU. Roa herinandro talohan'ny nahafatesany, nanao famelabelarana tao amin'ny TEDxLAU izy izay nampitondrainy ny lohateny hoe “lesona 4 notsoahako tamin'ny ady amin'ny homamiadana”, niresahany momba ny tantarany izay tratry ny homamiadana sy ny nahatonga azy ho feno hery hanoherana io aretina io.
Teny antenantenan'ny famelabelarana nataony, nitsangana avokoa ny mpihaino azy ary nitehaka nirefodrefotra noho ny nandreseny ny tahotra io homamiadana io tamin'ny nilazàny hoe:
Tsy nisafidy ny ho Sara Khatib aho, izay mararin'ny homamiadana ka bory tànana, fa ny hijanona ho Sara Khatib, mpianatra ao amin'ny taona fahaefatra ao amin'ny sampana farmasia, somary mikaviavia izay rehefa manao zavatra, mankafy Nutella, ary tratry ny homamiadana fotsiny izao sy bory tànana.
Tao anatin'ny fanambarana ofisialy iray, nisaona an'i Khatib ny LAU:
Tamin'ny endrika miramirana no nijereny an'izao tontolo izao ary nanapa-kevitra ny hankafy fiainana izy na inona na inona manjo azy. Izay no fanomezana natolotr'i Sara Khatib ho an'ny olona rehetra nahafantatra azy, ary hijanonana ho aingam-panahy ho an'ny olona maro ny tantarany, eny fa na dia fotoana ela aorian'ny nahafatesany aza.
Nahatsiaro an'i Khatib i Noura Andrea Nassar avy ao amin'ny vondrona Humans of LAU, izay nanaraka ny TEDxLAU, ka hoy izy manao hoe:
Nahare vaovao ratsy aho teo am-pifohazana io maraina io: nindaosin'ny fahafatesana i Sara El Khatib, olona nivahiny tao amin'ny hetsika TEDxLAU tamin'ny 23 Aogositra. Tapa-bolana lasa izay aho no nahita an'i Sara tao amin'ny TEDxLAU. Vehivavy iray mpiady amin'ny fiainana izy io, olona azo halàna tahaka, ary tena tsara fanahy. Mino aho fa manaiky izany avokoa ianareo rehetra nahafantatra azy na farafaharatsiny nijery azy tamin'ny famelabelarana nataony.
Nanaiky izany i Kareem Zreik, mpianatra tao amin'ny American University tao Beirut, nahatsiaro ny tantarany niarahany taminy izy:
Tadidiko tsara ny nihaonanay voalohany tao ivelan'ny efitra fanaovana famelabelaran-kevitra. Tsy fantatro mihitsy ny mombamomba azy. Nihondikondina teo izy, mino aho fa nisalasalaIa izy ny amin'ny hoe varavarana iza no hovohainy na koa tsy afaka manao izany (mety hoe nisy famelabelaran-kevitra natao tao anatiny tao). Nitsikiko izy ary hoy aho taminy, azafady indrindra, hanatrika ny TEDxLAU ve ianao? Nanaiky izy sady nitsiky, natoroko azy ny varavarana ary niroso namoha izany aho hidirany. Hatreo dia mbola tsy fantatro hoe iza izy. Ny fomba fijorony dia manafina fa vao avy nodidiana izy. Eny, nandritra izay fotoana fohy izay, ary mba tsy ampisehoana fa tena mahonena ny mijery azy, dia afaka miteny ny tsirairay fa olona manana ny maha-izy azy izy, manam-pitiavana be ary koa manana hatsaram-panahy ao anatiny ao. Izy no karazan'olona mahate-ho tia ary mahafinaritra na dia iray minitra fotsiny aza no iresahanao aminy. Ary ny fifandraisako taminy voalohany no nialoha làlana ny hahafantatra ny rehetra momba azy, na koa izay marika mety hahafantatra fotsiny hoe iza izy (hatramin'ny nahafantarako fa nanana olona iray hanolotra tantaran'olona anankiray miavaka kely izahay hatao famelabelarana tamin'io andro io). Marina ny azy. Tsy ny aretina mahazo azy no hamaritana azy. Fa i Sara fotsiny ihany. Ary faly aho fa io olona io no nasaina ho fantariko, na dia nandritra ny fotoana fohy sy nandalo fotsiny ihany aza izany.
Nahita tranganà fahafatesana maro aho, ary tsy mahafantatra ny mety ho an'ny hafa aho manoloana io voina io. Fa ny tady iraisan'ny olona rehetra namoy havan-tiana izay hitako hatramin'izay dia ny miezaka hatrany manao zavatra tsara sy misy lanjany aorian'ny nahalasàna an'iny olona iny. Ary raha mikasika an'i Sara, raha tsy manao na inona na inona isika, heveriko fa tokony hahatsiaro mandrakariva ny heriny, ny fanantenany, ny fitsikiny ary ny tena zava-dehibe dia ny hafatra napetrany isika. Ho an'ireo izay miady amin'ny aretina na koa ratra, ary ho an'ireo havan-tiantsika izay mitolona eo anilantsika, dia aleo ho raisintsika mba hijanona ao am-pontsika ny hafatr'i Sara ary hampihatra izany.
Tsy ny aretina mahazo antsika no mamaritra antsika. Mety hahatsapa fangirifiriana isika, fa ny jaly aterak'izany dia miankina amin'ny safidintsika ihany.
Irariana mba handry am-piadanana io olona mahafinaritra io ankehitriny. Isaorantsika azy ny nandonany antsika tamin'ny toe-tsainy sy ny toe-panahiny.
Nanomboka namorona vondrona iray i Khatib ho fanohanana ireo bory ratsam-batana ao Libanona. Ho fahatsiarovana azy dia nanapa-kevitra ny hanohana hatrany io fomba fijeriny io ny namany, ny mpiara-mianatra aminy ary ireo havan-tiany